Lalao Stormfall aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Stormfall an-tserasera
Lalao Online Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny olon-dehibe Puzzle lalao Strategy lalao Fiarovana ny lapa ady lalao Online Games Voynushka Economic simulation Browser tetika Castle iPlayer Age ny Ady Games VKontakte Mpiara-mianatra Games Game Mile Roux
Stormfall Ady Multiplayer lalao an-tserasera navigateur tetika izay mitondra mpilalao ho amin'ny tontolo virtoaly Darkshayn. Indray andro dia nitondra ny fito mpanjaka lehibe, ka hendry sy mahay mandanjalanja, eo ambanin'ny azy ireo hampitombo ny siansa sy ny teknolojia, ny kolontsaina sy ny toe-karena, ny fanjakana Niroborobo. Fa nisy loza, dia very tao anatin'ny iray andro. Hatramin'ny ny tany dia Nipoaka ny haizina, ny eo an-toerana manomboka irreconcilable ambony ady ho ny zara-tany momba ny seza fiandrianana Shtormfolla. Nanomboka tao amin'ny Ady ny seza fiandrianan'ny milalao mpilalao hahazo tanàna kely iray amin'ny antonony fitarihana dia hitombo ho lehibe fanjakana, sy ny tompon'ny tany dia ho afaka ny ho lasa iray amin'ireo pretenders ho any amin'ny seza fiandrianana, fa izy no niakatra ho any amin'ny asa tsy afaka hiatrika tsy misy mahery tafika, ka tsy maintsy hanana ny mitovy toe-karena, fiarovana ary manafintohina miaramila. iPlayer ny seza fiandrianan'ny Ady tetika, izay tsipiriany rehetra dia zava-dehibe - ary nandeha ny fotoana araka ny tokony ho nanorina trano loharano manome fidiram-bola ara-bola sy ny sakafo avy amin'ny tafika, dia hanokatra fahafahana ho amin'ny fitrandrahana ary hita. Amin'ny tafika an-tsaina ampy hanompo afaka nanohitra ny tafika fahavalo, ambony amin'ny isa, tahaka ny isan- karazana ny tarika manana toetra manokana, ary ny hafa miady amin'ny fahavalo miaramila. Play ny lalao ny seza fiandrianan'ny Ady ny mety ho manao ady amin'ny mpanohitra fehezin'ny solon- tsaina sy ny ady amin'ny namany, dia tena mpilalao mipetraka eo anoloan'ny ordinatera Monitors. Hamorona fanjakana matanjaka afaka mandeha amin'ny fomba samy hafa, dia manorina, ny hafa voaroba, ary ny sasany ara-barotra. Fa fifaneraserana, dia afaka mampiasa ny misiona diplomatika, na hiditra ao fifanarahana. Mba hifaninana ho amin'ny seza fiandrianana sy ho tonga ny mpanapaka ny tany eo amin'ny lalao Ady ny seza fiandrianan'ny fanoratana dia tsy maintsy. Mandehana izany fotsiny ianao, dia mila mameno ny endriky amin'ny fitendrena any an-tsaha ny mety anarana, ny adiresy mailaka sy ny tenimiafina, na amin'ny fipihana eo amin'ny bokotra amin'ny sary ny iray amin'ireo tambajotra sosialy. Taorian'ny famoronana kaonty, dia afaka miditra ny lalao avy amin'ny fitaovana mifandray amin'ny Internet nefa tsy very teo aloha tratra vokatra. Stormfall miandry ny mahery fo eto amin'izao tontolo izao ho lasa angano sy ny tompony, izay hevitra ho nihaino ny tsy an-kanavaka ambany fahefan'i isaky ny mpilalao dia afaka, fotsiny mila ho hendry ny mitondra ny olona sy ho tsy misy indrafo ny fahavalo nanafika délibération vokany, ary miaro ny mangidy vokatra.